ဘဝမှတ်တိုင်: ✔Equlaizer Plus PRO v0.7 For Android ✔
✔Equlaizer Plus PRO v0.7 For Android App(February,th18,2014 ရက်နေ့ Updated)✔
-Android ဖုန်းမှာ သီချင်းတွေရဲ့ sound effects အသံတွေကို မိမိစိတ်ကြိုက် လိုချင်သလို ချိန်ညှိခွဲထုတ်ပေးမယ့်
"Equlaizer + Pro v0.7" ဆိုတဲ့ နောက်ဆုံးထွက် Full Version Updated Application လေးတစ်ခုကို တင်ပေးလိုက်ပါပြီ-
-Pro Version Updated လေးဖြစ်တာမို့လည်း အသုံးဝင် features များစွာပါဝင်ပေးထား ပါသေးတယ်-
-ဒီ app ကို google play store မှာ ဝယ်ယူ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် $4.99 ပေးဝယ်ရမှာ ဖြစ်ပြီး အခုဒီမှာတော့ free download ဆွဲယူ အသုံးပြု နိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်-
-Music တွေကို Low,Mid,High ချိန်လို့ရမယ်။Preset စနစ်ပါဝင်တာကြောင့် သီချင်းတစ်ပုဒ်ချင်းစီကို မိမိစိတ်ကြိုက် Eq: tracks တွေကိုချိန်ညှိပြီး Preset ထဲ title ပေးကာ record မှတ်ထားလို့ရခြင်းကြောင့် သီချင်းတစ်ပုဒ်ချင်းစီကို နှစ်သက်ရာ ဆွဲထုတ်ပြီး track color မျိုးစုံနဲ့ နားဆင်ခံစား လို့ရစေမှာပါ-
-Track တွေကို ခွဲထုတ်ချိန်ညှိနိုင်တာကြောင့် Music ရဲ့ Background မှာရှိတဲ့ Strings လို အသံမျှင်းမျှင်းလေးနဲ့ Frequency ကြိမ်နှုန်းလေးများကိုပါ အသေးစိတ်ခံစား နိုင်စေတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်-
-Bass Boost စနစ်တွင်မှာလည်း တုန်ခါစနစ် ကို auto ထိန်းပေးထား တာကြောင့် Over Vibration ဖြစ်သွားမှာကို ကာကွယ်ထားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်-
-အသံထုတ်ပေးနိုင်မှု Force စနစ်ထောက်ပံ့ ပေးမှုကောင်းမွန်တာကြောင့်၊သီချင်းသံများ ယိုင်လွဲသွာတာမျိုးမရှိခြင်း၊Track တစ်လိုင်းခြင်းစီရဲ့ စွမ်းရည်ကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ ချိန်ညှိဖော်ထုတ်ပေးနိုင်တာမို့၊ကျနော်တို့လို Music Notes ရေးသူများအဖို့ အတော်လေး ကျေနပ်မှုကို ရရှိစေပါတယ်-
စတဲ့ Preset မျိုး ခွဲထုတ်ပြီး Sound ရဲ့ Quality ကို အရသာရှိရှိခံစားနိုင်ဖို့ဆိုရင် Equlaizer plus Pro ကို ဒေါင်းကြစို့ဗျာ။
-Apk File Size 11MB ရှိပြီး၊
Android OS Version 2.3.3 နှင့် အထက်ရှိထားသော ဖုန်းများမှာ ထည့်သွင်း
install လုပ်၌ အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ-
★DOWNLOAD ဆွဲရန် လင့်ခ်★
Visualizers are now identifiable by names.
Smoother navigation through the range of spectrums.
Tags: Equalizer + Pro (Music Player) apk, Equalizer + Pro (Music Player) apk download, Equalizer + Pro (Music Player) for android, Equalizer + Pro (Music Player) v0.7 full version
DOWNLOAD ဆွဲရန် လင့်ခ်
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 2/21/2014 11:14:00 pm